सरकारले मुलुकभर माघ २ गतेबाट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)विरुद्धको 'बुस्टर’ मात्रा खोप लगाउन शुरू गरे पनि सर्लाहीमा भने उक्त खोप अझैसम्म आइपुगेको छैन ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा जिल्ला अस्पताल मलङ्गवाका प्रमुख डा. नवलकिशोर झाले 'बुस्टर’ मात्रा खोप सर्लाहीमा आई नसकेको बताए ।
प्रदेशबाट आउनुपर्ने खोपहरू अहिलेसम्म नआएको र आउने बित्तिकै खोप लगाउन सुरु गरिने डा. झाले बताएका छन् । सरकारले माघ २ गतेबाट ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत मुलुकभर 'बुस्टर’ मात्रा खोप लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत शुक्रबार प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पत्र लेखेर अग्रपङ्क्तिमा खटिनेहरूलाई माघ २ गतेदेखि र ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई माघ १४ गतेदेखि 'बुस्टर’ मात्रा खोप दिन आग्रह गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।